Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kansarka Naasaha Hore: Sidee Verzenio ku caawin kartaa?
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Caafimaadka Warka
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) ayaa oggolaaday Eli Lilly iyo Shirkadda (NYSE: LLY) Verzenio® (abemaciclib), oo ay weheliso daawaynta endocrine (tamoxifen ama aromatase inhibitor), daaweynta bukaanka qaangaarka ah ee leh hormoonnada hormoonnada- togan (HR+), receptor factor factor koritaanka epidermal 2-negative (HER2-), node-positive, kansarka naasaha hore (EBC) khatarta sare ee soo noqoshada iyo dhibcaha Ki-67 ee ≥20% sida ay go'aamisay FDA-ansixisay imtixaan Ki-67 waa calaamad muujinaysa kororka gacanta. Verzenio waa ka-hortagga CDK4/6 ee ugu horreeya oo kaliya ee loo oggolaaday dadka bukaanka ah.
"Waqti ka dib, natiijooyinka wadajirka ah ee barnaamijka horumarinta kiliinikada Verzenio waxay muujiyeen CDK4/6 profile inhibitor oo kala duwan, iyo xogta taariikhiga ah ee tijaabada Boqortooyada ee taageertay tilmaantan cusub ee HR + HER2- kansarka naasaha hore waxay u taagan tahay tallaabo kale oo muhiim ah oo hore loogu qaaday dadka. kuwaas oo u baahan fursado daaweyn cusub, "ayuu yiri Jacob Van Naarden, madaxweyne ku xigeenka sare, maamulaha Loxo Oncology ee Lilly iyo madaxweynaha, Lilly Oncology. "Waan ku faraxsanahay ansixintan bilowga ah ee goobta adjuvant iyo sida xogtani ay sii socoto, waxaan rajeyneynaa fursado dheeraad ah oo aan kula shaqeyneyno maamulka caafimaadka si loo ballaariyo isticmaalka Verzenio goobtan."
He Verzenio Wajiga 3aad ee Boqortooyada Tijaabadu waa mid aan kala sooc lahayn (1: 1), calaamad furan, laba koox, daraasad xarumo badan leh oo haweenka qaangaarka ah iyo ragga qaba HR + HER2-, noode-positive, EBC oo leh astaamo bukaan-socod iyo caafimaad oo waafaqsan khatar sare soo noqoshada cudurka. Tijaabada, bukaanada ayaa la kala soocay si ay u helaan laba sano oo ah Verzenio 150 mg laba jeer maalintii oo lagu daray doorashada dhakhtarka ee daaweynta caadiga ah ee endocrin, ama daaweynta caadiga ah ee endocrine oo keliya. Bukaannada ku jira labada gacmood ee daawaynta ayaa la faray inay sii wadaan helitaanka daawaynta endocrine adjuvant ilaa 5-10 sano sida uu ku taliyay takhtarkooda. Meesha ugu dambeysa ee daraasaddu waa badbaadada cudur-la'aanta ah (IDFS) waxaana lagu kulmay falanqayn horay loo sii cayimay oo ku-meel-gaar ah oo loogu talagalay dadka la doonayo in lagu daweeyo (ITT), iyada oo horumar la taaban karo laga sameeyay IDFS bukaannada lagu daweeyay Verzenio plus. ET marka la barbar dhigo kuwa lagu daweeyay ET oo keliya. Iyadoo la raacayo tilmaamaha khabiirada, IDFS waxaa lagu qeexay dhererka ka hor inta aan kansarka naasuhu soo laaban, kansar kasta oo cusub uu soo baxo, ama dhimasho.
Ka dib markii lagu gaaray barta ugu dambeysa ee daraasadda ee dhammaan dadka isdiiwangeliyay, falanqayn horay loo sii cayimay oo IDFS ayaa sidoo kale lagu sameeyay bukaannada leh khataro caafimaad oo halis ah iyo arrimaha cudurada iyo dhibcaha Ki-67 ≥20%. Falanqayntan koox-hoosaadka ah (N=2,003) waxaa ku jiray bukaanada qaba ≥4 togan axillary lymph nodes (ALN), ama 1-3 togan ALN ​​oo qaba cudurka Fasalka 3 iyo/ama cabbirka buro ≥5 cm, oo burooyinkooda ay lahaayeen buundada Ki-67 ee ≥20%. Waxa kale oo jirtay horumar la taaban karo oo ku yimid IDFS kooxdan hoose ee hore loo sii cayimay ee bukaanada helaya Verzenio iyo ET marka la barbar dhigo kuwa helay ET keligood (HR=0.643, 95% CI: 0.475, 0.872, p=0.0042).1,3
Oggolaanshahani waxa uu ku salaysan yahay natiijooyinka waxtarka leh ee ka soo baxa falanqaynta koox-hoosaadkan oo leh dabagal dheeraad ah, oo la qabtay hoc ka dib. Falanqayntan, Verzenio oo lagu daray ET waxay sii waday inay muujiso faa'iido caafimaad oo macne leh, iyadoo boqolkiiba 37 ay hoos u dhacday halista soo noqoshada kansarka naasaha ama dhimashada marka la barbardhigo adjuvant ET oo keliya oo loogu talagalay bukaannada leh astaamo caafimaad iyo astaamo jireed oo halis ah iyo Ki -67 dhibcood ≥20% (HR: 0.626 [95% CI: 0.49-0.80]), iyo faa'iido buuxda ee heerka dhacdada IDFS ee 7.1 boqolkiiba saddex sano. Tirada dhacdooyinka IDFS wakhtiga falanqayntan waxay ahayd 104 iyadoo Verzenio lagu daray ET marka la barbar dhigo 158 ET oo keliya. Guud ahaan xogta badbaadada ma ahayn mid qaan-gaar ah, dabagal dheeraad ahna waa socotaa.
Dareen-celinta xun ee ka timid boqorku waxay la socdeen astaanta badbaadada ee Verzenio.2 Badbaadada iyo dulqaadka ayaa lagu qiimeeyay 5,591 bukaan. Dareen-celinta xun ee ugu badan ee laga soo sheegay (> 10%) ee Verzenio iyo ET (tamoxifen ama aromatase inhibitor) cudud, iyo> 2% ka sarreeya cududda ET oo keliya, waxay ahaayeen shuban, caabuq, daal, lallabbo, madax-xanuun, matag, stomatitis , rabitaanka cuntada oo yaraada, dawakhaad, finan, iyo alopecia.3 Waxyaalaha caadiga ah ee aan caadiga ahayn ee shaybaadhka (dhammaan darajooyinka ≥10%) ayaa la kordhiyey creatinine, tirada unugyada dhiiga cad ayaa hoos u dhacay, tirada neutrophils ayaa hoos u dhacday, dhiig-yaraan, tirada lymphocyte hoos u dhaca, tirada platelet hoos u dhaca, ALT kordhay, AST kordhay, iyo hypokalemia.
Oggolaanshahan FDA wuxuu ku dhisan yahay caddaymaha la aasaasay ee Verzenio, kaas oo hore loogu oggolaaday daawaynta noocyada qaarkood ee HR + HER2- horumarsan ama kansarka naasaha. Iyadoo la raacayo oggolaanshahan, FDA waxay ballaarisay isticmaalka Verzenio dhammaan calaamadaha, marka lagu daro daaweynta endocrine, si loogu daro ragga. Verzenio waxaa lagu heli karaa awoodda kiniinka ee 200 mg, 150 mg, 100 mg, iyo 50 mg.
"Naqshadeynta iyo natiijooyinka daraasadda boqortooyadu waa isbeddel-is-beddelid waxayna ka dhigan tahay horumarka ugu horreeya ee daaweynta adjuvant ee HR + HER2- kansarka naasaha waqti aad u dheer," ayay tiri Sara M. Tolaney, MD, MPH, Harvard Medical School, Dana- Machadka Kansarka Farber, iyo baaraha daraasadda monarchE. "Oggolaanshahan FDA ee Verzenio oo ay weheliso daaweynta endocrine ee goobta hore ee kansarka naasaha waxay awood u leedahay inay noqoto heer cusub oo daryeel dadkan ah. Waxaa na dhiirigeliyay hoos u dhigista khatarta ah ee soo noqoshada xitaa wixii ka dambeeya muddada daaweynta ee labada sano ah ee bukaannadan, waxaanan uga mahadcelinayaa inaan awoodo inaan tan u soo bandhigo sidii ikhtiyaar daawaynta bukaannadayda."
"Haweenka iyo ragga la nool khatarta sare leh ee HR + HER2 - kansarka naasaha ee hore waxay rabaan inay sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay u yareeyaan khatarta uu cudurku ku soo laabanayo, iyagoo rajo ka qaba inay ku noolaadaan bilaash. Oggolaanshaha Verzenio waxay siisaa ikhtiyaar daawaynta cusub si ay uga caawiso inay sidaas sameeyaan,” ayuu yidhi Jean Sachs, madaxa fulinta, Living Beyond Breast Cancer. "Oggolaanshahan ayaa rajo cusub u keenaya bulshada kansarka naasaha."
Xogta taageeraya oggolaanshahan waxaa lagu soo bandhigi doonaa Oktoobar 14 ee Bulshada Yurub ee Caafimaadka Oncology (ESMO) Plenary Virtual.
Calaamadinta Verzenio waxay ka kooban tahay digniino iyo taxaddar shuban, neutropenia, cudurka sambabada interstitial (ILD/pneumonitis), hepatotoxicity, venous thromboembolism, iyo embryo-uurjiifka sunta. Far bukaanka calaamadda ugu horreysa ee saxarada dabacsan si ay u bilaabaan daawaynta ka hortagga shubanka, kordhiyaan dareeraha afka, oo ay ogeysiiyaan bixiyehooda daryeel caafimaad. Samee tirinta dhiigga oo dhammaystiran iyo tijaabooyinka shaqada beerka ka hor bilowga daawaynta Verzenio, labadii toddobaadba mar labadii bilood ee ugu horreysay, bishiiba labada bilood ee soo socda iyo sida kiliinikada lagu tilmaamay. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka, Verzenio waxay u baahan kartaa wax ka beddelka qiyaasta. La soco bukaanka calaamadaha iyo calaamadaha xinjirowga dhiigga iyo sambabada oo u daawee sida caafimaad ahaan ku habboon. La tali bukaanka khatarta ka iman karta uurjiifka iyo inay isticmaalaan ka-hortag uur oo waxtar leh.
Hoos ka eeg Macluumaadka Badbaadada Muhiimka ah oo buuxa Qorista Macluumaadka wixii macluumaad dheeraad ah.
Riix halkan si loo eego xogta kansarka naasaha ee hore.
Riix halkan si aad u aragto macluumaadka tijaabada caafimaad ee boqortooyada.
Guji si aad u aragto sawirada alaabta Verzenio: 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg.
Rinjiyeyaashii rabbaaniga ahaa ee Raphael Hadda waa loo soo celiyay nolosha
Bal eega tirada badan: Trump waa taekwondo-ga...
Shirkadda Apple oo joojisay iibka cusub ee Turkiga sida lacagta Turkiga...
Australia ayaa dib u fureysa si ay si buuxda u talaalan...
Waa Shimbir… Waa Diyaarad…..